Soo dejisan Notepad++ 7.1 Standard iyo Portable – Vessoft
Soo dejisan Notepad++
Buugayga ++ – editor qoraal ah oo taageera Saan ee ugu luqadaha barnaamij ah. software The leedahay awood ah muuqaalada, sida Iftiiminta Saan oo Bogani, Otomatik erayada iyo tags, taageero macros, blocks oo laabma, iwm buugayga ++ ku jira search engine dheereeyey by mid ka mid ah ama dhammaan faylasha cayiman. software The kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto iyo edit dukumentiyada duwan oo isku mar uu furmo suuqa hal. Buugayga ++ waa awoodaa inuu ballaariyo fursadaha ay u gaar ah oo ku xira daro.
Taageerada ugu badan ee luqadaha barnaamijyada
La shaqee dukumentiyada duwan oo isku mar
Customizes Iftiiminta Saan ah
Kuweeda text galay koodh lagama maarmaanka ah
Comments on Notepad++:
Notepad++ Software la xiriira:
English, Українська, Français, Español... SnapPea 2.76.0.6535 iyo 3.0.1.867 beta